कस्को कमाई कति ? क्रिकेटर बिराटकोहली को की फुटबलर रोनाल्डो को बढी ? « तात्तातो खबर
कस्को कमाई कति ? क्रिकेटर बिराटकोहली को की फुटबलर रोनाल्डो को बढी ?
क्रिकेट टीमका कप्तान विराट कोहली भारतका सबैभन्दा धनी क्रिकेटर हुन् । फोर्ब्सको सन् २०१७ को टप पेड एथलिस्टमा वराट एक्ला भारतीय खेलाडी हुन् ।
उक्त सूचीको शीर्ष १०० मध्ये विराट ८९ औं नम्बरमा छन् । भलै उनी यस सूचिको निकै तल छन् तर एक्लो क्रिकेटर भएका कारण उनी आफ्नो खेलको सबैभन्दा धनी खेलाडी हुन् । यस लिस्टको शीर्षस्थानमा फुटबलर क्रिष्टियानो रोनाल्डो छन् । उनको सामु विराट गरिब देखिन्छन् ।
विराट कोहलीले वर्षमा करिब १ सय २२ करोड भारु एंडोर्समेंट्सबाट कमाउँछन् । मिडिया रिपोर्ट्सका अनुसार उनी एक दिनको ५ करोड भारु चार्ज गर्छन् । पहिले उनको पारिश्रमिक रेट २.५ देखि ४ करोडको बीचमा कमाउँथे । विराट भारतको सबैभन्दा महंगो सेलिब्रेटी हुन् ।
उता फुटबलर रोनाल्डो एंडोर्समेंटमार्फत एक वर्षमा करिब २ सय २४ करोड कमाउँछन् । नाइकसँग उनले सन् २०१५ मा आजीवन सम्झौता गरेका छन् । यसमार्फत उनले करिब १ बिलियन डलर अर्थात् ६ हजार ४०२ करोड भारु कमाउँछन् । रोनाल्डो घडी कम्पनी Tag Heuer को ब्रान्ड एम्बेसडर हुन् ।
हामीले यहाँ सबैभन्दा बढी कमाउने क्रिकेटर र सबैभन्दा बढी कमाउने फुटबलरको भारतीय रुपैयाँमा तुलना गरेका छौं । जसमा विराट कोहली र क्रिष्टियानो रोनाल्डो रहेका छन् ।
विराटले एक वर्षमा कूल २ सय ८२ करोड कमाउँछन् भने रोनाल्डोले १ हजार १८२ करोड कमाउँछन् ।
विराटको एक वर्षको तलब १ सय ४१ करोड छ भने रोनाल्डोको ५ सय ९५ करोड छ ।
खेल जितेमार्फत पाइने उपहारबाट विराटले मात्र १९ करोड कमाउँदा रोनाल्डोले भने ३ सय ७१ करोड कमाउँछन् ।
एंडोर्समेंटबाट विराटले वर्षमा १ सय २२ करोड कमाउँछन् भने रोनाल्डोले २ सय २४ करोड कमाउँछन् ।
इंस्टाग्राम पोष्टबाट कमाउने मामिलामा भने विराटले रोनाल्डोलाई पछि पारेका छन् । यसमार्फत विराटले ३.२ करोड कमाउँछन् भने रोनाल्डोले २.७ करोड कमाउँछन् ।
सन्दिप लामिछाने बने आइपिएल खेल्ने पहिलो नेपाली खेलाडी, यस्ता दिग्गजसँग खेल्नेछन्
बार्सिलोना सँग ३-० ले हार्दा पनि जब लडेका मेस्सीलाई उठाए रोनाल्डोले
रोनाल्डोको टिमलाई पछि पार्दै मेसिको टिम बिजय..पुरा हेर्नुहोस
६१ अाैँ बार डे का अबसरमा ने.बा.एे. द्वारा फुटबल अायाेजना
मलेसियाविरुद्ध नेपालको उत्कृष्ट सुरुवात, नेपालको ५० रन पुरा
मलेसियाबिरुद्ध नेपालको ८ विकेटको जित.. सक्दो सेयर गर्दैजानुहोला
हेटौंडाको एउटा गाउँमा हेर्नुहोस... Bhagya Neupane